Al-shabaab oo xukun ku fulisay Nin gowracay Hooyadiis iyo Walaalkiis | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Al-shabaab oo xukun ku fulisay Nin gowracay Hooyadiis iyo Walaalkiis
Al-shabaab oo xukun ku fulisay Nin gowracay Hooyadiis iyo Walaalkiis
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa ay goob fagaare ah oo ku taalla deegaan ka tirsan Gobolka Hiiraan xukun dil toogasho ah kula fuliyeen Nin lagu eedeeyay inuu horey u dilay hooyadiis iyo walaalkiis.
Al-shabaab ayaa dadweyne farabadan isugu geeyay goobta uu xukunka ka dhacayay oo ku taalla degaanka Shaw ee Hiiraan, si u daawadan dilka toogashada ee lagu fuliyay Ninkii dilay hooyadii dhashay iyo walaalkiis.
Ninka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Calasoow Cabdi, isagoona horey gowrac ku dilay hooyadiis Xaliimo Cusmaan Cumar oo 72 sana jir aheyd iyo walaalkiis Macallim Maxamuud Calasoow Cabdi.
Al-shabaab ayaa sheegtay in falka uu Maxamed Calasoow ku gowracay hooyadiis iyo walaalkiis ay ka argagaxeen dadka deegaanka uu falkaas ka dhacay oo ka tirsan Gobolka Hiiraan ee Bartamaha dalka Soomaaliya.
Mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa gudaha Soomaaliya kusoo badanayay falalka argagaxa leh, waxaana xusid mudan in Al-shabaab ay dhowr jeer xukuno dil toogasho ah ku fulisay rag geystay falal dadka deegaanada ay ka taliyaan ku abuuray Aragax.
Maqaal horeWeerar khasaaro dhaliyey oo lagu qaaday gaadiid ay wateen Ciidamo Kenyaati
Maqaal XigaGo’aan laga soo saaray Shir looga hadlay amniga oo ka dhacay Baydhabo